Izincwadi ezinhle kakhulu zesayensi
I-Great Lantern, kaMaria Konnikova
Umbhali ngaphambi kokuba abe ngumdlali we-poker, uMaría Konnikova weza emdlalweni wemidlalo yamakhadi kusukela ekuthonyweni yilowo nalowo mxoxi ofuna ukusondela esimweni esisha sokulandisa ukuze afake umongo. Sengeza odabeni ubudokotela bakhe kwezengqondo futhi sithola inguqulo eyinkimbinkimbi yePela ...
Ungayigwema Kanjani Inhlekelele Yesimo Sezulu, nguBill Gates
Lezi zindaba bezingakhangi isikhathi eside, ngisho nasengxenyeni yezemidlalo (ikakhulukazi kumlandeli weReal Zaragoza). Futhi, amahlaya eceleni, udaba lokuhwebelana kwembulunga yonke, ukuguquka kwesimo sezulu kunqatshiwe ngumzala kaRajoy wesayensi, futhi lokhu kuguqula i-coronavirus ngenjabulo ...
Emkhathini, ngu-Avi Loeb
Isihloko esigcwele sithi "I-Extraterrestrial: Humanity kusibonakaliso sokuqala sempilo ehlakaniphile engaphaya koMhlaba" futhi kufanele ifundwe okungenani kabili ukuze kuthathwe ukubaluleka kwalokhu kugomela. Ngemuva kwamakhulu amanoveli, ama-movie, izidakamizwa ze-psychotropic nezimfihlo eziphezulu ze-NASA, kubonakala sengathi ...
Impilo elandiswe ngabasapien eya eNeanderthal, kaJuan José Millas
Kuzoba ngezingxoxo ezitshela impilo ... Ngoba into eyodwa ukunxenxa i-sea bream njengabaxhumanisi ababi kakhulu obuvela ebuwuleni obusobala bokubuka kwabo okungenalutho, futhi enye into ukuthi sihlangana nama-proto-men amabili, abambene ngesandla, ngizimisele ukukhuluma ngokulunga ...
The Deadliest Threat, kaMichael T. Osterholm
Incwadi engokwesiprofetho eyaqala ukuxwayisa ngenkinga ye-coronavirus. Le ncwadi, ebhalwe ngomunye wochwepheshe abahamba phambili be-epidemiology, ilindele igxathu negxathu ubhadane oluhlasela umhlaba. Lolu hlobo olusha lubandakanya isandulela lapho inkinga ye ...
IMathematics and Gambling, kaJohn Haigh
IMathematics kanye, ikakhulukazi, izibalo, kube yizifundo ezimbili ezidale ikhanda elibi kakhulu kubafundi bazo zonke izikhathi, kepha ziyizindlela eziyisisekelo ekuthathweni kwezinqumo. Umuntu akayona inhlobo enesiphiwo esikhethekile sokuhlaziywa kwezinkulu ...